China Spiral fracturing Hose EN856 4SH mveliso kunye nabathengisi | INKOKHELI-FLEX
Ulwakhiwo: Umbhobho uqulethwe ngumaleko werabha wangaphakathi, ukuqiniswa kocingo lwesine kunye nomaleko werabha ongaphandle
Isicelo: Ukuhambisa utywala, ioyile hydraulic, ioyile yeoyile, ioyile yokuthambisa, i-emulsifier, i-hydrocarbon kunye nezinye ioyile hydraulic.
Ubushushu Working: -40 ℃ ~ + 100 ℃
Ububanzi begama I-ID (mm) WD mm OD OD WP
mm intshi imiz ubuninzi imiz ubuninzi imiz ubuninzi imiz imiz imiz
51.0 2 50.4 52.0 62.2 64.2 66.5 69.7 25.0 50.0 100.0 I-700.0 5.06
Lo mgangatho waseYurophu ucacisa iimfuno zeentlobo ezine zerabha ezigqunywe ngocingo oluqinisiweyo kunye nemibhobho yamathumbu e-boreal ukusuka ku-6 kuye ku-51. Ifanelekile ukusetyenziswa:
ulwelo lwamanzi ngokuhambelana ne-ISO 6743-4 ngaphandle kwe-HFD R, HFD S kunye ne-HFD T kumaqondo obushushu asusela kwi-40 ° c ukuya kwi-100 ° c yeentlobo ze-4SP kunye ne-4SH kunye ne -40 ° C ukuya kwi-120 ° C ngeentlobo R12 ~ kunye ne-R13 ；
ulwelo olusekwe emanzini kumaqondo obushushu aqala kwi-40 ° C ukuya kwi-70 ° c.
ulwelo-lwamanzi kumaqondo obushushu aqala kwi-0 ° C ukuya + 70 ° c.
Umgangatho awubandakanyi iimfuno zolungiselelo lokuphela. Inomda kwintsebenzo yamathumbu kunye neendibano ze-hoge.
QAPHELA 1: Amathumbu awakulungelanga ukusetyenziswa kunye neoyile ye-castor esekwe okanye ulwelo olusekwe kwi-ester.
QAPHELA 2: Iindibano zamathumbu kunye nemibhobho akufuneki ziqhutywe ngaphandle kwemida yalo mgangatho.
QAPHELA 3: Iimfuno zamathumbu e-hydraulic kwimigodi engaphantsi komhlaba zibekiwe kumgangatho owahlukileyo
Iindidi ezine zethumbu zichaziwe:
Uhlobo lwe-4SP - i-4-steel wire apiral medium hoses hoses;
Chwetheza i-4SH-intsimbi ye-4 yentsimbi ene-aspiral eyongezelelweyo;
Chwetheza i-R12- intsimbi ye-4 yocingo olujikelezayo olunemilinganiselo ephezulu yobushushu-umndilili woxinzelelo;
Chwetheza i-R13-ucingo oluninzi lwentsimbi olunomthwalo onzima wokulinganisa iqondo lobushushu eliphezulu-amanqaku aphezulu oxinzelelo.
Izixhobo kunye nolwakhiwo
I-hoses iya kubandakanya ioyile kunye namanzi anganyangekiyo kwimigca yerabha eyenziweyo, imijikelezo yokujikeleza yocingo lwentsimbi esongelwe ngemiyalelo yokutshintsha, kunye ne-oyile kunye nemozulu enganyangekiyo. Intambo nganye yentsimbi ejikelezayo iya kwahlulwa bubushushu beerabha zokwenziwa.!
3.2 Iindibano zombhobho
Iindibano zombhobho ziya kwenziwa kuphela kunye nezixhobo zombhobho ezinokusebenza kwazo okuqinisekisiweyo kuzo zonke iimvavanyo ngokungqinelana nalo mgangatho.
4.1 Iimfuno ze-Eydroatatia
I-4.1.1 xa ivavanywa ngokungqinelana ne-EN Iso 1402, uxinzelelo olusebenzayo oluphezulu, uxinzelelo lobungqina kunye noxinzelelo lokugqabhuka kwemibhobho kunye neendibano zombhobho ziya kuthobela amaxabiso anikwe kwitheyibhile 5.
Itheyibhile 5: Ubuninzi boxinzelelo olusebenzayo, uxinzelelo lobungqina kunye noxinzelelo oludubulileyo
4.1.2. Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 1402, utshintsho kubude bethumbu kuxinzelelo oluphezulu lokusebenza aluyi kudlula kwi-2% ukuya -4% kwiindidi ze-4SP kunye ne-4SH kunye ne-± 2% yohlobo lwe-R12 kunye ne-R13.
Ubuncinane be-radius bond
Xa igobile kumda omncinci wokugoba onikezwe kwitheyibhile ye-6 elinganiswe ngaphakathi ngaphakathi, i-hose iya kuba nakho ukwenza uxinzelelo olusebenzayo.
4.3 Ukunyanzeliswa kweemfuno zebele
4.3.1. Uvavanyo lwempembelelo luya kuhambelana ne-1SO 6803. Ubushushu bovavanyo buya kuba yi-100 ° yeentlobo ze-4SP kunye ne-4SH kunye ne-120 ° yeentlobo ze-R12 kunye ne-R13.
4.3.2 Kwiindidi ze-4SP kunye ne-ASH hose, xa kuvavanywa kuxinzelelo lwempembelelo elingana ne-133% yoxinzelelo oluphezulu lokusebenza, umbhobho uya kumelana nobuncinci be-400 000 yemijikelezo yokuqhubela phambili.
Uhlobo lwe-R12 ithumbu, kuvavanywa uxinzelelo lwempembelelo elingana ne-133% elona xinzelelo lusebenzayo, umbhobho uya kumelana nomjikelo we-4oo ooo impulse cycles.
Uhlobo lwe-R13 ithumbu, kuvavanywa uxinzelelo lwempembelelo elingana ne-120% yoxinzelelo oluphezulu lokusebenza, umbhobho uya kumelana nomjikelo we-500 000 wokujikeleza.
4.3.3. Akuyi kubakho kuvuza okanye ukungasebenzi kakuhle ngaphambi kokufikelela kwinani elichaziweyo lemijikelezo.
4.3.4 Olu vavanyo luya kuthathwa njengetiti eyonakalisayo kwaye uvavanyo luza kulahlwa kude.
4.4 Ukudityaniswa kweendibano zombhobho
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 1402 akuyi kubakho kuvuza okanye ubungqina bokungaphumeleli. Olu vavanyo luya kuthathwa njengolu vavanyo olonakalisayo kwaye isiqwenga sovavanyo siya kulahlwa kude.
4.5 ubhetyebhetye ebandayo
Xa kuvavanywa ngokungqinelana nendlela B ye-EN 24672 kubushushu be -40 ° c ngekhe kubekhona ukuqhekeka kwelensi okanye ikhava. Isiqwenga sovavanyo asivuzi okanye siqhekeke xa siphantsi kovavanyo loxinzelelo lobungqina emva kokuphinda ufumane ubushushu obushushu.
4.6 Ukubambelela phakathi kwamacandelo
Iziqwenga zovavanyo ziya kuba luhlobo lwe-5 lining kunye nokomeleza kunye nohlobo2 okanye uhlobo '6 lokugubungela kunye nokomeleza njengoko kuchaziwe kwitafile l ye-EN 28033; 1993 ，
4.7. Ukuxhathisa lingonakali
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-EN ISO 6945, ngamandla athe nkqo (50 ± 0, 5) N, "ukulahleka kobunzima emva kwemijikelo engama-2 000 akuyi kuba kukhulu kune-1g.
4.8 Ulwelo olungamanzi
4.8.1 Iziqwenga zovavanyo
Uvavanyo lokuchasana nolwelo luya kwenziwa kwiimakhishithi ezibunjiweyo zelinen kunye nokugubungela ikhompawundi, ubuncinci be-2 mm ubukhulu, imeko yokunyanga ngokulinganayo kuleyo yethumbu.
4.8.2 0il ukuxhathisa
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-ISO 1817, ulwelwesi lweentlobo ze-4SP kunye ne-4SH egxunyekwe kwioyile engu-3 ye-168 h kubushushu obungu-70 ° c ayizukubonisa ukuncipha okanye ukudumba kwevolumu okungaphezulu kwe-100%.
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-ISO 1817, i-lining kunye ne-inshurensi yeentlobo ze-R12 kunye ne-R13, egxunyekwe kwioyile engu-3 nge-70 h kubushushu be-120 ° c, ayizukubonisa ukuncipha okanye ukudumba komthamo omkhulu kune-100% kulwelwe I-125% ikhava.
4.8.3 Ukumelana namanzi okususelwa emanzini
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-ISO 1817, i-lining kunye nesigqubuthelo esigxunyekwe kulwelo lovavanyo olwenziwe ngokulinganayo kwe-1,2-ethanediol kunye namanzi afakwe amanzi kwi-168 h kubushushu be-70 ° C ayizukubonisa ukuncipha. Ukudumba kwevolumu akuyi kuba ngaphezulu kwe-25% kulwelwe okanye i-100% ikhava.
4.8.4 Ukumelana namanzi
Xa kuvavanywa ngokungqinelana ne-ISO 1817, i-lining kunye nesigqubuthelo sokuntywila emanzini nge-168 h kubushushu be-70 ° c ayibonisi ukuncipha. Ukudumba kwevolumu akuyi kuba ngaphezulu kwe-25% kulwelwe okanye i-100% ikhava.
4.9 Ukumelana neOzone
Xa kuvavanywa ngokungqinelana neNdlela yoku-1 okanye yesi-2 ye-EN 27326, kuxhomekeke kumgama omncinci wombhobho, akukho kuqhekeka okanye ukonakala kwekhava okuya kubonakala phantsi kokuphakanyiswa kwe-x2.
en Umthengi kunye nomenzi, banokufakwa, ukuba baceliwe.
Egqithileyo Ukonakala ngesanti kubunzulu baphantsi Hose EN856 4SP
Okulandelayo: Uxinzelelo oluphezulu lweemoto zokuhlamba imoto